Eebana wuu caddibi Caddibaadda u wayn.
Xagganagayna u soo noqon (khalqigu).
Eebe wuxuu ku dhaartay Waabariga.
Iyo Habenanada Tobanka ah (Arrafo).
Iyo Tirada siman iyo tan is dheer.
Iyo Habeenku markuu tagayu.
Miyayna arrintaasu ahayn wax loogu dhaarto Qof caqli leh.
Wax la mid ahna aan iugu abuurin dhulka.
Iyo Thamuud-kii ahaa dhagaxa kuwa ku jarjara Waadiga.
lyo Fircoonkii dhakawyada lahaa.
kuwiina ahaa ku xadgudbay dhulka.
12 Kuna badiyay dhexdiisa fassaadka.
Markaasaana Eeba ku shubay Caddibaad daran.
Marks Eebe Dadka imtixaano xoolana ugu nicmeeyo wuxuu dhihi (kan xun) waa lai sharrifay (isagoo faani).
Haddiise Eebe imtixaano oo Xoolaha ku yareeyo wuxuu dhihi Eebaa i dulleeyay.
Saas ma aha ee waxaydaan dhaqaalaynayn Agoonka.
Mana fartaan in masaakiinta wax la siiyo.
Waxaadna aad u cuntaan dhaxal xaq darro.
Xoolahana waxaad u jeceshihiin si daran.
Saas ma aha ee marka dhulka la burburiyo.
Eebe iyo Malaguna la yimaaddo amarkiisa Malaa'igtoo safan.